January 26, 2021 Xuseen 8
Puntlandtimes (Boosaaso)-Xukuumadda Puntland ayaa weerar culus ku qaaday dowladda Soomaaliya ee uu hoggaanka u hayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xilli muddooyinkii ugu dambeeyey uu sii xumaanayey xiriirka wadashaqayneed ee labada dhinac.
Puntland waxa ay sheegtay in dowladda feralka ah ee Soomaaliya ay mas’uul ka tahay dhibaatooyin ka jira qaar kamid ah deegaamada Puntland ayna dabada ka riixayso deganaansha la’aanta dhaqaale iyo arrimaha qiima dhaca shilling Soomaaliga ee ka taagan Puntland.
kkk waxan maqli jiray Habar dhaliwaysay Aleelo kuwaalatay ma markii uu dhaqalihii Wadanka Xaraystay ee Waxba dhaqaaqi wayeen ayuu Deni ku eedeyey farmaajo
Kkkkk. Walahay waa wax lagu qoslo. Ileen ceeb looma dhinto. Subxaanallah xataa xishood kii waa ka tegay.
Runtuu sheegay dowlada dhexe waxay gabtay wajibkii kasaaranaa lacagta somaliga
Ina Shire hadalkiisa waxa aan kaliya ka fahmay, MAJIDHO & NAANIIN!
Haddaan u soo noqdo, inta aysan eedayn dawladda dhexe, horta ma aamminsanyihiin dawlad dhexe? Waxa uu ka meermeerayaa fashilka ku habsaday maamul-beeleedka Garoowe, oo uu isleeyahay cid kale ku eedee MUSUQMAASUQA & WAX IDABA MARINTA ay ummaddii ku cuna qabteen. Ma sagaaraa, sagaaradaa wax muuqda istiraahda qariye.
Waar dadku waa idin ogyihiin in mashiinnadii aad weli lacagta ku daabacataan oo aad doolar ku beddeletaan, inta canshuurtooda yar ka soo baxda ama mucaawinada aad u heshaanna aad dabka saarataan oo ku niikisaan oo xaflado ku qabsataan oo hadba aad meel ugu gooshtaan. ALLOW DADKA WAXBA YAY CUNIN YAA YIROO WALANQO RUUGAAYA; tuugo uruurtay.
midkaan abshir la leeyahay waa mid duurku jirto ahaan jiray ayaan umaleynaaa Lacagtii shilling Somaliga Tii dowlada kacaankii way dhamaatee mida shilling Somaliga cusub yaaa sameeyay soo Puntland masameynin”
War dowladii federalka ahayd ee dhibkii lo’ogaa loo soo maray in ceelkii ay dowladnimadii somaliyeed ku dhacday laga soo saaray ma sidaas baa u danbeysay in Gobalkii isku hayey Somali sidaas u liicay xag dhaqaalo oo moodo in dowladii federal ka ayyanba cid u direyn haday noqoto wasiirka maaliyada iyo bangiga dhexe mise dad gooni ah oo neceyb u qabaa haysta oo leh maxaa loo soo ceshay dowlad somaliyeed oo shaqeyneysa. Anigu wali waan fahmi la’ahay sababta aan looga arag wasiirka magaaliyada ee federal ka in puntland waxaa u harsan dowlada dhexe 13day clock is ticking
Farmaajo iyo xaaskiisa waxay labaatan malyan dollar saami kaga iibsadey wershadda sonkorta Uganda ka dhiseyso gabadha Soomaaliyeed maalqabayn ah Amina moghe Hirsi….
Waxaa igu ballan in aan tooshka ku ifiyo oo meel kasta gaarsiiyo arrintaan hadduu Farmaajo joojinwaayo dhibka uu ku hayo Puntland iyo Jubbaland.
Shirkadda laga iibsadey saamiga waa
Horiyal-Investments-Holding Company Limited wershadda sonkorta waa Atiak Sugar manufacturing factory….
Cayaal waa gelin dambe.
Waxaan dhowaan xiriir la suubshey Farmaajo xaaskiisa Saynab Macallin
Waa nacnac iyo naaniin ay kujidho cali xumo, muu shaqadiisa qabsado ama meesha baneeyo duf ku bax naga amus ama wax xigmad leh sheeg kan iyo magaciisa waa isu egyihiin. Kanaaba ajaanibtii puntland Zinzibar uga timid ka fool xun duf ku bax magac xamaduuba mags daray